Ulexite, Nkume telivishọn, nsonaazụ TV - TV Rock - vidiyo
Zụta ulexite eke na ụlọ ahịa anyị
Ulexite, hydrated sodium calcium borate hydroxide, mgbe ụfọdụ a na-akpọ Rock Rock, bụ mineral nke na-eme n'ụdị mkpu agba dị ọcha ma ọ bụ na eriri yiri ya. Mkpanaka eke ulexite na-eme ka ìhè dị na ogologo anyụike ha, site na ntụgharị.
Ulexite bụ mineral dị mgbagwoju anya, ya na ntọala nke nwere sodium, mmiri na octahedra hydroxide. A na-ejikọ ụdọ ndị ahụ site na calcium, mmiri, hydroxide na polyhedra oxygen na nnukwu boron nkeji. Ha mejupụtara t bohedhedra tetrahedra atọ na ụdị triangular borate abụọ.
A makwaara Ulexite dị ka okwute TV n'ihi ọdịdị ngwa anya ya na-adịghị ahụkebe. Arụ ọrụ nke ulexite na-arụ ọrụ dị ka eriri anya, na-enye ọkụ ogologo oge site na ntụgharị. Mgbe etinyere ihu ulexite dị larịị mara mma nke nwere akụkụ na akụkụ nke eriri ahụ, ezigbo ure dị mma ga-egosipụta onyonyo nke ihe ọ bụla dị n'akụkụ akụkụ nke ọzọ.
Mmetụta eriri ọkụ bụ nsonazụ ọkụ site na ụzarị ọkụ na ngwa ngwa n'ime eriri nke ọ bụla, ntụgharị nke ihe ọkụ ọkụ na-emegharị ngwa ngwa na ngwa ngwa nke ọkụ ngwa ngwa. Ihe na-adọrọ mmasị na ya bụ ọgbọ nke cones atọ, abụọ n'ime ha gbadara agbagha, mgbe ụdọ laser na-eme ka ọkụ na-acha ọkụ. Enwere ike ịhụ cones ndị a mgbe ị na-elele ọkụ ọkụ site na ịnweta.
Nkume telivishọn / mmetụta TV
Nchịkọta akịkọta akpụ nke ulexite ihe onyonyo nke ihe dị n'akụkụ nke ọzọ nke mineral. Ngwongwo a na-ahụ anya bụ ihe a na-ahụkarị maka eriri na sịntetik, mana ọ bụghị na mineral, na-enye ulexite nickname TV rock. Ngwongwo ihe ngosi a bụ n'ihi nchegharị ya na eriri ejiri ejima, ụgbọ elu ejima kachasị ama ama dị na ya. A na-egosipụta ìhè n'ime n'ime eriri nile ọ bụla na-agba gburugburu ntụgharị ọkụ. Mmetụta ngwa anya a na - esitekwa na oghere buru ibu nke silic octahedral guzobere n'ụkpụrụ ịnweta. Arụ ọrụ sịntetik nke eji eme eriri fiber na - ebufe onyoonyo na ngwugwu nke kristal yiri otu aka na - enwe ulexite na - emepụtakwa onyonyo n'ihi ịdị adị dị iche iche nke ntụgharị uche dị n'etiti eriri. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na ihe ahụ na-acha agba, agba niile na ulexite na-emepụtagharị ya. Yiri ure elu uregbe akụkụ ya na akụrụngwa na –emepụta ihe oyiyi kachasị mma, ebe mgbaghasị nha nke onyonyo onyonyo ga-eme ma ọ bụrụ na elu adịghị n’ime ya. N'ụzọ dị ịtụnanya, ihe atụ nke okwute nwere ike ịmịpụta ọmarịcha ihe oyiyi. Satin spar gypsum gosipụtakwara mmetụta a. Kaosiladị, akwara dị nke ukwuu nke na-enweghị ike inyefe ezigbo ọfụma. Ogo nke eriri eme ihe kwesiri ekwesi na onyonyo nke amuma a.
Ulexite na-enyere aka ịgwọ ma mezie ọhụụ nke anụ ahụ. Enwere ike iji ya nyere aka mee ka ịhụ ụzọ gị sie ike ma merie ọhụhụ ụzọ.
Ọ ga-ewepụ wrinkles, mfe isi ọwụwa.
Nkume a ga - enyere aka imeri ihe isi ike na sistemụ akwara, ọkachasị na ịmachi ihe mgbu akwara na - akọwaghị ya. Ulexite ga - eme ka ebe nchekwa gị na itinye uche gị kwalite.
Ulexite, sitere na Boron, California, USA